Raharaham-pirenena Archives - Page 224 sur 296 -
Raikitra amin’izay ny tena asa. Taorian’ny fametrahana ny vato fehizoro, nosantarina omaly ny fanombohan’ny asa fanitarana ny seranam-piaramanidina eny Ivato. Afaka telo taona eo ho eo, ho afaka handray fiaramanidina efatra miaraka ny seranam-piamanidina vaovao …Tohiny
Mbola averin’ ny fitondram-panjakana ombieny ombieny fa tsy manavaka antokom-pinoana izy fa misokatra amin’ny antokom-pivavahana rehetra. Nohamafisin’ ny minisi-panjakana miadidy ny Fambolena sy ny Fiompiana, Rakotovao Rivo, izany ny sabotsy teo, nandritra ny lanonana ara-pivavahana …Tohiny
Lehilahy iray sy vehivavy iray no voasambotry ny zandary teny Maibahoaka-Ivato, tamin’ny sabotsy hariva teo tokony ho tamin’ny 06 ora sy sasany, rehefa avy naka an-keriny mpivady tompona mpamongady iray, teny an-toerana. Araka ny voalaza, …Tohiny
10/06/2017 admintriatra 0
Na dia eo aza ny fankatoavan’ireo mpitsara sasany ny baiko izay omen’ny sendikà, dia nivoaka tamin’ny fahanginany kosa omaly ireo mpitsara tsy mankatoa ny fikomiana tanterahin’ ireo namany. Nambaran’ity fikambanana ity tamin’ny alalan’ny mpitondra teniny …Tohiny
« 1 … 222 223 224 225 226 … 296 »
Mafy ihany ity mivavaka amin’ny vola ity, ary mahavita « mivaro-tena » mihitsy ny mpanao politika noho izay resa-bola izay. Nanao fanambarana ny kandidà Sahara Rabearisoa, fa hanohana ny kandidà Andry Rajoelina, ny fihodinana voalohany ...Tohiny